Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1312 lak
Ny fiainana any amin'ny tany vaovao
Alakamisy 27 Des.
Vakio ny Apôk. 21:3. Amin’ny fomba ahoana no anovan’izany zavatra mahatalanjona izany ireo fanandramana eo amin’ny fiainana ataon’ireo mponina any amin’ny tany vaovao?
Angamba tsy misy fahitana hafa miteraka tahotra masina miharo fanajana ao amin’ny Baiboly manontolo azo ampitahaina amin’ny fahitana asehon’i Jaona mpanoratra ny bokin’ny Apôkalipsy eto; tsy ho fonenan’ny olombelona fotsiny ny tany vaovao fa ho fonenan’Andriamanitra ihany koa. Hanome voninahitra ny fiaraha-monin’ireo voaavotra amin’ny fanatrehany Ilay Mpamorona izao tontolo rehetra izao, Izay masina sy ambony dia ambony. Eny, marina fa hitoetra ho miavaka amin’ny voariny ho mandrakizay Andriamanitra, saingy any amin’ny tany vaovao, dia ho voaaisotra ny fampisarahana an’Andriamanitra sy ny taranak’olombelona, fampisarahana izay nateraky ny ota.
Ho tafaverina ihany koa ny tena firaisam-po marina – tsy eo amin’Andriamanitra sy ny olombelona ihany fa eo amin’ny olombelona sy ny zavaboary ary ao anivon’ny zavaboary koa. Lazain’i Jaona fa tsy hisy ozona intsony any (Apôk. 22:3), ary voalazan’ny faminaniana mialoha ihany koa fa ho tanteraka ilay hoe hitsahatra hatreo ny faniriana hanimba nisy teo amin’ny tontolon’ny biby (Isa. 65:25).
Ambonin’ny firaisam-po tanteraka, ny fanafoanana ny “fisentoan’izao zavatra ary rehetra izao” dia hidika fa ny zavatra rehetra izay manimba – ny fahalovana, ny aretina, ny fahafatesana, ary ny fahoriana – dia ho zavatra tamin’ny lasa (Rôm. 8:21; Apôk. 21:4).
Vakio ny Sal. 8. Inona no hafatra ho antsika eto, indrindra indrindra eo anatrehan’ny fahazavana avy amin’izay nianarantsika tamin’ity telovolana ity?
Be dia be ny akon’ny fanatrehan’Andriamanitra ao amin’ny tany vaovao, sy ny akon’izany ho an’ny fiainana any – indrindra moa fa nambaran’ny siansa tamintsika, mihoatra noho ny tamin’ny lasa, ny habe sy ny velaran’ny zavaboarin’ Andriamanitra. Araka ny tombantombana dia mivelatra mahatratra an’arivo tapitrisa taona-hazavana (‘année-lumière’) maro izao tontolo rehetra izao “hita maso”. Mieritreritra anefa ny manam-pahaizana ankehitriny hoe 7 isan-jaton’ny zava-misy marina fotsiny ity izao tontolo izao lehibe sy midadasika ity!
Ary rehefa eritreretina hoe: Ilay Andriamanitra namorona izany rehetra izany dia tsy nionona fotsiny tamin’ny fahafatesany ho antsika, fa mbola hiara-monina amintsika mandritra ny mandrakizay koa Izy! Hatreto aloha, satria voafetra ny saintsika olombelona lavo tao amin’ny fahotana, dia tokony hatsahatsika ny fiheverana izany amin’ny saina mandanjalanja, fa ny tokony hataontsika dia ny mandohalika sy miankohoka ary midera Ilay namorona antsika, Izay tsy vitan’ny hoe namorona antsika fotsiny, fa nanavotra antsika koa ary mampanantena ankehitriny fa hiara-monina amintsika mandritra ny mandrakizay.